Ma Dagaal Ayey Isku Diyaarinayaan Sucuudiga Iyo Iran? - Riyadh Iyo Tehran Oo Hadallo Kulul Oo Hanjabaad Ah Isweydaarsaday - Jigjiga Online
HomeDiintaMa Dagaal Ayey Isku Diyaarinayaan Sucuudiga Iyo Iran? – Riyadh Iyo Tehran Oo Hadallo Kulul Oo Hanjabaad Ah Isweydaarsaday
Maka (JigjigaOnline) – Boqorka waddanka Sucuudiga ayaa ka digay halis weyn oo dunida kusoo fool leh, taas oo caqabad ku noqon doonta ganacsiga dunida u kala goosha gaar ahaan saliidda.
Shir ka dhacay Maka oo uu boqor Salman Bin Abdilaziz iskugu yeedhay hoggaamiyeyaasha Muslimiinta caalamka, ayaa waxa hadheeyey xiisadda u dhaxaysa Sucuudiga iyo Iran.
Boqor Salman ayaa waxa uu ku eedeeyey Iran inay farogelin ku hayso arrimaha gudaha ee dalal ku yaalla gobolka, ayna horumarinayso hubka halista ah ee Nukliyeerka iyo barnaamijyada gantaallaheeda dagaalka, kuwaas oo uu sas ka muujiyey.
Shirkan degdegga ah oo Sucuudigu uu dalbaday maalmo kaddib weerarro lagu qaaday goobo ku yaalla Sucuudiga iyo laba markab oo Saliid siday oo ku sugnaa xeebta Imaaraadka Carabta, ayaa waxa uu ku eedeeyey Iran inay ka dambayso weeraradaas.
“Rajiimka Iran waxa uu farogelin ku hayaa arrimaha gudaha ee dalalka gobolka, waxayna horumarinaysaa hubkeeda Nukliyeeerka iyo barnaamijyadeeda gantaallaha, waxyna cabsi gelinaysaa xorriyadda ganacsiga caalamiga ah ee maraakiibta Saliidda dunida u kala qaada” Sidaas ayuu yidhi Boqorka Sucuudiga oo ka hadlayey shirka dalalka Khaliijka iyo Islaamka.
Dhinaca kale, Iran ayaa Jimcihii maanta ka jawaabtay eedaymaha uga yimid Sucuudiga, waxaanay ku tilmaameen eedaymihiisa kuwo aan sal lahayn.
Wakaaladda Wararka ee IRNA ee dalka Iran oo soo xiganaysa afhayeenka wasaaradda Arrimaha dibedda ee dalkaas Abbas Mousavi ayaa waxay sheegtay in eedaymaha ay usoo jeediyeen madaxda Carabtu inay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn.
“Waxaanu u aragnaa Sucuudiga inuu ku dedaalayo inuu gobolka keeno fikir qayb ka ah qorshaha guul-darraystay ee Maraykanka iyo Sahyuuniyadda ee ka dhanka ah Iran.” Ayuu yidhi afhayeenka u hadlay Iran ee IRNA ay soo xigatay.